Saciid bin Caamir; hoggaamiye sheekadiisu saamayn leedahay! – Cabdicasiis Guudcadde
June 3, 2015 July 10, 2016 Guudcadde
Saciid bin Caamir; hoggaamiye sheekadiisu saamayn leedahay!
Cumar bin Khaddaab RC, wuxuu, xilligiisii, magaalada Ximis (Suuriya ka tirsan waqti xaadirkan) badhasaab uga dhigay Sacad Bin Caamir.
Muddo yar ka dib markii uu amiirku magacaabay guddoomiyaha ayaa waxaa magaalada Meddiina soo gaadhay wefti ka soo kicitimay magaalada Ximis. Cumar ayaa ka codsaday inay u qoraan oo diiwaan geliyaan saboolka magaalada si uu lacag ugu qoro. Way diiwaangeliyeen, saa waxaa ku jiray Saciid Bin Caamir! Cumarbaa waydiiyay ‘Waa kuma Saciidkani?’ Waxay ku dhaheen ‘Waa guddoomiyahagii’! ‘Ma guddoomihiinnii baa faqiir ah?!’ ayuu waydiiyay. “Haa, wallaahay isagaaba noogu faqiirsan! Maalmo dhan ayaan gurigiisa dab laga shidin!’ ayay ku yidhaahdeen.
Inta uu ooyay Cumar ayuu u dhiibay 100 diinaar oo kiish ku jira kuna yidhi u geeya ha ku noolaadee.
Markii weftigii soo laabtay ayay waaligii farta ka saareen kiishkii. Saciidbaa yidhi isagoo kor u dhawaaqaya, markuu kiishkii furay, ‘Innaalillahi wa innaa illayhi raajicuun!’ sidii ooy masiibo haleeshay.
Islaantisiibaa waydiisay ‘Oo maxaa dhacay? Ma amiirkii Muslimiintaa geeriyooday?’. ‘Wax ka waynbaa dhacay! Adduunyadiibaa iisoo gashay si ay Aakhiradayda iiga wasakhayso!’ ayuu ugu jawaabay. ‘Oo maad ka takhalustid?’ ayay ku tidhi. ‘Maad iga caawin hayee?’ ayuu waydiistay. Haa bayna ugu jawaabtay, iyadoon war ka hayn arrintii diinaarka.
Markaasuu bilaabay inuu masaakiinta u sii qaybiyo waxoogaygii loosoo dhiibay!
Waqti dheer ka dib, ayuu Cumar soo booqday magaalada Ximis, wuxuu dadkii ka waraystay badhasaabkooda. Way u ammaaneen balse waxay sheegeen inuu leeyahay saddex dhaqan oo ay ka ashkatoonayaan!
Wuu u yeedhay markaasuu isu keenay dadkii iyo Saciidba, wuxuu Cumar waydiiyay dadkii waxa ay sheegayeen ee ay kaga cabanayaan guddoonka magaalada
Waxay yidhaahdeen ‘Waa ta kowaade, subaxii guriguu ku habsaamaa oo wuxuu dadka u soo baxaa xilli danbe oo barqadii ah’.
Cumarbaa u jeestay dhankii Saciid waydiiyayna wuxuu arrinkaa ka leeyahay. Saciidbaa hadalkii qaatay oo yidhi ‘Runtii maan jeclayn inaan iclaamiyo, laakiinse, reerkaygu ma laha adeege, anigaa u qoosha cajiinka, waanan sugaa intuu ka faxayo ka dibna waan u dubaa, markaasaan intoon soo waysaysto dadka u soo baxaa’.
Cumarbaa hadloo yidhi ‘haye, dadoow maxuu yahay qodobka kale?’.
Dadkii: ‘Habbeenkii dadka ma ajiibo, oo hadduu gabbalkuba dhaco ood is tidhaahdo albaabkiisa garaac kaama furayo’.
Cumar: ‘haye, Saciidoow kanna maxaad ka leedahay?’.
Saciid: ‘Wallaahay tanna maan jeclayn inaan iclaamiyo, laakiinse, maalintaydii iyagaan siiyay, habeenkaygiina Eebbe ayaan siiyay’!
Cumar: ‘haye, dadoow muxuu yahay ka saddexaadna?’.
Dadkii: ‘Cumaroow, waxaa jira maalin bisha ka mid ah oo aan la aragba!’.
Cumar: ‘haye Saciidoow tanna?’.
Saciid: ‘Anigu ma lihi adeege ii maydha dharka, dhar aan ka ahayn intaa aan iminka gashanahayna ma lihi, maalintaa ay sheegayaanna shaygaygaas baan maydhaa, dabadeedna waan sugaa intuu qalalayo, ka dibna waan kusoo jufaa oon u soo baxaa’!
Halkaa markay maraysay ayuu Cumar yidhi ‘Waxa mahadi u sugnaatay Allihii aan beenin malahii aan kaa qabay!’.
Waxa laga dheefi karaa sheekadan in ruuxu, siiba markuu xilka hayo, iska ilaaliyo hantida ummadda ogaadana in ay hilib sumaysan tahay. Midda kalena aanu maankiisa gelin in uu mansabkan dartii ku qaato gunno dheeraad ah. Eebbe dartii hawlaha ha u qabto. Shaqada uu hurayo ha kala qaybiyo; badhna dadka ha siiyo badhka kalena Ilaahay ha u gooyo.
Aynnu wax ka taransanno dhacdooyinkaa hore, isla jeerkaasna aynnu kala soo dhex baxno falsafado iyo qaacidooyin aynnu nolosheena habsami u socodkeeda uga faa’idaysan karno.